निर्दिष्टीकरण, डिजाइन, आंतरिक र उपकरण: सबै सबैभन्दा "सुबारु Impreza" बारे रोचक
सबै सबैभन्दा "सुबारु Impreza" बारे रोचक: निर्दिष्टीकरण, डिजाइन, भित्री र उपकरण
प्रभावशाली सुबारु मोडेल को एक "सुबारु Impreza" छलफल गर्न सकिन्छ। यो मिसिन को प्राविधिक विनिर्देशों ध्यान लायकका छन्, र तिनीहरू सबै विवरण बताउन चाहन्छु। तर सुरु गर्न - यो अचम्मको मोडेल को इतिहास बारे।
एक कार सिर्जना
"सुबारु Impreza", तल छलफल गरिने प्राविधिक विनिर्देशों, 1992 मा देखियो। पनि त्यसपछि यो मिसिन को उत्पादन गर्न थाले। र 1994 मा हामी विशेष कक्ष Impreza उत्पादन गर्न थाले। सामान्यतया, विकासकर्तालाई मूल विश्व र्याली च्याम्पियनशिप, को WRC रूपमा ज्ञात मा सहभागिता को योग्य हुन भनेर एक कार बनाउन चाहन्थे। धेरै पनि दौड मा यो कार विजेता आशा harbored। खैर, कारण परिश्रम र प्रविधि एक, शक्तिशाली शानदार र छिटो "सुबारु Impreza" सिर्जना गर्न व्यवस्थित छन्। विनिर्देशों प्रभावित: यो मोडेल कम्पनी को ट्रम्प कार्ड भएको छ। गरौं र्याली संग्रामहरू जीतेको हासिल गर्न असफल भयो, तर कार लगेर मोटर वाहन बजार मा एक आला छ। यसबाहेक, त्यहाँ स्थापित छ र धेरै खरीदारों देखि प्रेम र पहिचान जित्यो छ।
कार "सुबारु Impreza" को हडताली सुविधाहरू एक, थप विवरण पछि छलफल गरिने प्राविधिक विनिर्देशों, यसको उपस्थिति छ। म एक स्टाइलिश डिजाइन प्राप्त, र यो पहिचान गर्न गाह्रो छैन। र भित्री धेरै रोचक आए। विशेष मनपर्ने विधानसभा गुणवत्ता र सामाग्री को एक सही फिट। को भित्री गरौं र विशाल गरिएका, तर Ergonomic ड्राइभिङ स्थिति को स्तर - माथि। धेरै आलोचकहरु यसलाई सही कल गर्न हिम्मत। यो मिसिन गरौं र एक परिवार कार रूपमा अवस्थित तर केही यसलाई खेलकुद-उन्मुख छ कि बिर्सन्छन्। पनि निर्माताहरु यसको बारेमा भन्नुहोस्। कार, सुन्दर व्यावहारिक, सुविधाजनक र frisky थियो। र यसका पर्याप्त लागत कार लागि चालक प्रक्रिया चलाउनु एक वास्तविक खुशी दिनुभयो।
को 2000s को संस्करण
समय गयो रूपमा, सुधार प्रविधि, र उत्पादन अझै पनि खडा गर्दैन। नयाँ "सुबारु Impreza" थिए। विनिर्देशों तिनीहरूलाई राम्रो, थप शक्तिशाली हुन्छन्। उदाहरणको लागि, 2007 संस्करण। यो बाटो गरेर, तेस्रो जेनेरेसन पहिले देखि नै छ। सुरुमा, केवल एक कार थियो "सुबारु Impreza hatchback।" विनिर्देशों मिसिन प्रभावित - 1.5-लीटर 107-अश्वशक्ति इन्जिन वा 2-लीटर SOHC, उत्पन्न शक्ति 150 "घोडाहरू"। यी उपकरण सबैभन्दा लोकप्रिय र मांग थिए। यी संस्करण को पहिलो 5-ब्यान्ड मार्गदर्शन गियरबक्सलाई वा 4-गति "स्वचालित" संग संयोजन मा उपलब्ध छ। उत्तरार्द्ध मात्र 4-गति स्वचालित प्रसारण पूरा भएको थियो।
तर "सुबारु Impreza 2008" घमण्ड गर्न सक्छन्, सबै छैन। कार को प्राविधिक विशेषताहरु धेरै व्यापक छ। मात्र होइन पारंपरिक सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव मा - कार monoprivodnom संस्करण प्रस्ताव थियो। र अझै त्यही समयमा, 2008 मा, लाइन मा, यो पालकी को संस्करण थप्न निर्णय भएको थियो। आखिर, यी मोडेल साँच्चै कठोर लोकप्रियता प्राप्त गर्न थाले।
"सुबारु Impreza hatchback 2008" विनिर्देशों नै थियो। पालकी बाह्य मात्र यसको पूर्ववर्ती भिन्न हुन्छ। अद्यावधिक जंगला Chrome-छोट्याउन शरीर तत्व, वृद्धि सान्त्वना - यी यसको सुविधाहरू छन्। पनि निर्माता लामबद्ध गर्न पालकी मार्केटिङ विचार आधारित थप्न निर्णय थियो उल्लेख किनभने केही लागि होइन।
"चार्ज" को "सुबारु Impreza 2008" को संस्करण
यो मिसिन यसको पूर्ववर्ती थियो कि ती फरक को प्राविधिक विनिर्देशों। ट्रंक, symmetrical ड्राइभ र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा को वृद्धि मात्रा, - 2.5 लिटर थियो जो मात्रा शक्ति एकाइ, turbocharged। यो एकाइ 230 "घोडाहरू" को एक शक्ति उत्पन्न! विकासकर्तालाई साँच्चै मोटर परिमार्जन गर्न प्रयास धेरै राखे। यो मात्र शक्ति, तर पनि हानिकारक उत्सर्जन को मात्रा कम गर्न प्रतिबिम्बित गरिएको छ। वायुमण्डलीय शक्ति एकाइ, wherein को चुच्चो को माथिल्लो वितरण स्थिति पनि नयाँ सेवन प्रणाली र सुसज्जित थियो को catalytic कनवर्टर। र म माथि मोडेल (एक WRX बढी ज्ञात), एक सम्पूर्ण नयाँ 6-ब्यान्ड मार्गदर्शन प्रसारण हासिल गरेको छ त्यो पनि भन्न चाहन्छु।
र अन्तमा, "सुबारु Impreza hatchback 2008" पछि आयो जो 2010 मोडेल, मा केहि शब्द। यी मोडेल को प्राविधिक विशेषताहरु पनि राम्रो भएका छन्। र यो जारी गरिएको छ WRX एसटीआई ज्योति संस्करणमा यस अवधिमा छ। अझ शक्तिशाली इन्जिन र अद्वितीय hinged aerodynamic तत्व संग।
साथै, विकासकर्ताहरूले निकै निलम्बन सुधार र 18 इन्च मिश्र धातु पाङ्ग्राहरू मा कार सेट छन्। सी डी-changer र शक्तिशाली स्पिकरहरू रुचि हुनेछ "रसदार" बास संग चर्को संगीत सुन्न प्रेमीहरूको। नेभिगेसन प्रणाली पनि छ, मा-बोर्ड कम्प्युटर, अगाडि र पक्ष airbags, inflatable पर्दे, गाविस (गतिशील स्थिरीकरण), ब्लुटुथ प्रणाली, र थप।
300 HP, 2.5-लीटर, 6-ब्यान्ड "संयन्त्र" संग - मुख्य सुविधा र एक प्रमुख लाभ, कार र यति लोकप्रिय बनेको धन्यवाद छ: र अन्तमा, इन्जिन वर्णन।
Defa (preheater): स्थापना र समीक्षा
बाला स्विच गर्नुहोस्। को स्टीयरिंग स्तम्भ स्विच हटाउँदै
आफ्नै हातले स्वतः मिलाउने
भ्रामक पर्श कायेन्ने टर्बो एस
ओपल Astra गाडी - हृदय विजेता
Renault ग्रैंड दर्शनीय, समीक्षा र सुविधाहरू
Ingrowing कर्न्स लागि प्रभावकारी उपचार
मास्को मा Balashikha सामेल हुँदै, नयाँ सीमाना राजधानी
व्यञ्जनहरु चाउचाउ नाविकता को दृष्टि से
"प्लैटिनम फिटनेस" (र्याजान बाटो): विवरण र समीक्षा
ताल Uchum क्रास्नायार्स्क क्षेत्र
कीव सर्कस "Kobza"
त्यो स्टकहोम गर्न पर्यटकहरु प्रदान गर्दछ? फोटो, आकर्षण
रावण कुर्कोवा: रूसमा सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री मध्ये एकको जीवनी
सपना व्याख्या: के सीढी सपना
Pneumothorax को विवरण: रोगहरु को प्रकार, गराउँछ, निदान र उपचार
Tsvetotip शरद ऋतु: शैली र रहनसहन
माणिक संग सुनको झुम्का (फोटो)